पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पुलिस र झापा ११ भिड्ने, को पुग्ला त लालबन्दी गोल्डकपको फाइनल ? - Koshi Online
पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पुलिस र झापा ११ भिड्ने, को पुग्ला त लालबन्दी गोल्डकपको फाइनल ?
जेठ ३०, सर्लाही, सर्लाहीको लालबन्दीमा जारी ‘लालबन्दी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र झापा ११ भिड्ने भएका छन् । गत जेठ २४ गतेदेखि सुरु भएको सो प्रतियोगितामा आजको विजेता अन्तिम दुईमा पुग्नेछ ।
खेल अपरान्ह ४ बजेदेखि सुरु हुनेछ । झापा ११ का केही मुख्य खेलाडी राष्ट्रिय टिमका काठमाण्डाै गएका कारण झापाले मुख्य खेलाडिबिहिन खेल खेल्नेछ ।
२४ गतेदेखि लालबन्दीमा सुरु भएको लालबन्दी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सोमबारकाे खेलमा गोरखा ब्वाइज रुपन्देहीलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हाे । पुलिसले गोरखा ब्वाइजलाई २–१ ले हराएर सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो ।
को पुग्ला त लालबन्दी गोल्डकपको फाइनल ? आफ्नो कमेन्ट राख्नुहोला !